Iyo Caliber zvaunofarira pane | Linux Addicts
Diego ChiGerman Gonzalez | 30/04/2022 18:15 | General, Free Software
Calibre's Configuration panel inotibvumira kunyatsogadzirisa maitiro eiyi e-book manager.
Kuenderera mberi nhevedzano yezvinyorwa zvedu pa Caliber, tichatsanangura nzira yekusarudza zvatinoda. Caliber is suite yemapurogiramu matatu; maneja wekuunganidza e-book, EPUB uye AZW fomati yebhuku mupepeti uye muverengi ane mafomati akawanda. Pakupera kwechinyorwa iwe unowana zvinongedzo kune zvakapfuura zvinyorwa.
Kuti uwane bhatani rezvaunoda iwe unofanirwa kudzvanya kurudyi rwemenyu bar.
1 The preferences pane
2 Nyaya Dzapfuura
Kuisa mune zvaunofarira bhatani tinogona:
shandura maitiro kubva kumativi akasiyana eCaliber.
Dzokorora wizard yekugamuchira kuona kuti raibhurari inochengeterwa kupi uye kuti mabhuku acho akagadzirirwa mudziyo upi.
Wana plugins izvo zvinowedzera mabasa echirongwa.
Reboot in debug mode: Iyi isarudzo yekuvandudza-chaiyo uye inobvumidza iwe kuwana maitiro ekuita.
Tangazve pasina kushandisa wechitatu-bato plugins. Izvi zvinobatsira pakutsvaga kana plugin iri kukonzera nyaya.
MuCaliber tinogona kushandura zvachose chimiro chemushandisi. Iyo icon picker ine yakafara sarudzo.
kudzvanya bhatani zvaunofarira isu tinowana panhizha apo isu tinogona kuchinja zvinhu zvakasiyana. Chekutanga cheizvi Chitarisiko.
Kune iyo huru interface isu tinogona:
Sarudza hupamhi hwemushandisi interface.
Sarudza mumwe mutauro kunze kwemutauro wehurongwa.
Ita kuti purogiramu yepurogiramu ienderane nepamusoro-soro skrini.
Wedzera icon kune desktop.
Batidza kana kudzima zviziviso pakupedza basa.
Chinja nzira iyo rondedzero yemabhuku inoratidzirwa.
Gonesa kana kudzima kugona kuwedzera mabhuku nekukweva nekudonhedza.
Zvese izvi zvinoitwa nemamenu ekudonha kana nekutarisa mabhokisi.
Nezve maonero emakavha iwe unogona kusarudza saizi, ndeipi data yekuratidza, uye mangani mavhavha ekuchengeta mundangariro.
Imwe nzira inofadza ndeye shandisa zviratidzo. Iyi mifananidzo midiki inoratidza kuti rimwe bhuku rinosangana nemamiriro ezvinhu. Aya mamiriro akananga kumunda wega wega uye anosarudzwa kubva pane yekudonha menyu.
En Zvinyorwa zvebhuku tinosarudza kuratidza butiro uye kana zvakadaro, kukura kwakadini uye kuti tonyora here kana kuti kusanyora nhevedzano yemabhuku ane manhamba echiRoma.
Tinogona kusarudza kutsvaga otomatiki ruzivo nezvemabhuku nevanyori vawo paAmazon, Google Books, Goodreads uye Wikipedia.
Muchikamu chino, kuwedzera isu tinokwanisa kushandura chiratidzo chega chega kune chinongedzo, kuseta masitayera kuratidza ruzivo nezve bhuku uye kuti ndeipi data yekuratidza.
Shandura metadata inosarudza kuti fomu rinoratidzwa sei kuti rigadzirise.
Sarudzo dze tag explorer sarudza maitiro kana nhamba yezvikamu iri shoma pane kana yakakura pane yakapihwa nhamba. Mukuwedzera, iwe unogona kusarudza kuti ndeupi ruzivo rwakawedzerwa runoratidzwa uye mune mavara api.
Nekuremekedza cover explorer inogona kuratidzwa mune yakaparadzana hwindo uye yakazara skrini, sarudza kuti mangani mavhavha ekuratidza, isa chikamu chechiyero uye isa otomatiki kupuruzira nguva.
En Quick View sarudza kuti ndeapi makoramu ekuratidza uye kuti ungashandura sei izvi.
Chekupedzisira, isu tinokwanisa kuseta mitemo yekuzvibata kusarudza mavara uye zvidhori zvakapihwa kumakoramu.
Hadzisi dzese sarudzo dzeCaliber dzinotsanangurwa mubhuku uye, nezvimwe, hazvisi nyore kuziva kuti ndezvipi. Semuenzaniso, muchikamu chino pane sarudzo yekuona kana Hongu / Kwete makoramu akawedzera iyo Undefined sarudzo kumenyu. Sezvo paine akawanda akasiyana sarudzo pahwindo iri, handina chokwadi nezvauri kutaura nezvazvo.
Zvikasadaro, pano tinosarudza kana ikatizivisa nezve kuburitswa kweshanduro nyowani, kana nhau dzakadhawunirodherwa dzatumirwa kumuverengi, iyo yakasarudzika yekubuda fomati, kurongeka kwemafomati ekuisa zvaunofarira uye mafomati ayo muverengi weCalibr anoshandiswa.e.
Muchikamu chinotevera tichapedzisa nemashandisirwo esarudzo uye isu tichataura nezve shanduko yemaparamita mukushandurwa kweEbooks.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » The Caliber zvido zvepaneru